२८ वर्षपछि अर्जेन्टिनाले कोपा अमेरिकाको उपाधि चुम्दा मेस्सिले मैदानबाटै श्रीमतीलाई भिडियो कल (भिडियो सहित)
July 11, 2021 1554
आइतबार बिहान माराकाना रंगशा|लामा सदाबहार प्रतिद्वन्दी ब्राजिललाई १–० गोलको नतिजामा पराजित गर्दै अर्जेन्टिनाले २८ वर्षपछि कोपा अमेरिकाको उपाधि जित्यो । फाइनलबाहेकका खेल बन्द रंगशालामा हुनु र युरोपियन च्याम्पियनसिप पनि एउटै समयमा भएकाले कोपा अमेरिका`को चर्चा अपेक्षित हुन सकेन ।
तर, विश्व फुटबलका दुई पावर हाउस अर्जेन्टिना र ब्राजिलको फाइनलमा भेट निश्चित भएसँगै प्रतियोगिताको सरगर्मी एक्कासी बढेको थियो । र, सर्वकालिन महान् फुटबलरमध्ये एक- लियोनेल मेसी`का लागि पहिलो अन्त`र्राष्ट्रिय उपाधि जित्ने सम्भावित अन्तिम मौका थियो । र, ब्राजिललाई माराकानामा पराजित गरेसँगै मेसीले पहिलो र अर्जेन्टिनाले २८ वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जिते ।
कोपा अमेरिका २०१५ र २०१६ मा लगातार फाइ|नल हारेको अर्जेन्टिना २०१९ मा ब्राजिलसँग सेमिफाइ|नलमा पराजित भएको थियो । सन् २०१४ विश्वकपको फाइनलमा जर्मनीसँग पराजित भएको अर्जेन्टिना पटक–पटक उपाधि नजिक पुगेको थियो ।
अन्ततः कोपा अमेरिका २०२१ को उपाधि जितेसँगै ६ पटकका बालोन डी’अर विजेता मेसीले ट्रफी ब्याबिनेटमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि पनि राख्न पाउने भएका छन् ।अर्जेन्टिनी कप्तान लियोनल मेस्सी र ब्राजिली स्टार नेयमार संयुक्त रुपमा कोपा अमेरिका कपको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बनेका छन् । मेस्सीले सर्वोत्कृष्ट खेलाडीसँगै प्रतियोगिताको सर्वाधिक गोलकर्ताको उपाधि पनि जिते ।
दक्षिण अमेरिकी फुटबल फेडेरेसन (कन्मेवल) को प्रावि`धिक टोलीको अध्ययन पछि मेस्सी र नेयमारलाई संयुक्त रुपमा कोपाको सर्वाेत्कृष्ट खेलाडी घोषणा गरिएको हो । कोपाको इतिहा`समा पहिलोपटक दुई खेलाडीले सर्वाेत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड बाँडेका छन् ।
समापन समारो`हमा भने मेस्सीले मात्र अवार्ड ग्रहण गरे । कन्मेवलको छनोट समितिले दुई मध्ये एक खेलाडीलाई मात्रै छान्न असहज भएकाले दुवै खेलाडीलाई कोपाको सर्वाेत्कृ`ष्ट खेलाडी घोषणा गरिएको विज्ञप्ति|मा उल्लेख छ ।
आइतबार बिहान मारा`काना स्टेडिय`ममा भएको फाइनलमा अर्जेन्टिनाले घरेलु टोली तथा साविकको विजेता ब्राजिललाई १–० ले हराउँदै २८ वर्षपछि कोपाको च्याम्पि|यन बनेको थियो । यस्तै मेस्सी पनि अर्जेन्टिना|बाट पहिलो उपाधि जित्न सफल भए ।
Prevकोपा अमेरिकामा अर्जेन्टिनासँग पराजित भएपछि रुँ`दै बाहिरिए नेइमार (भिडियो सहित)
Next२ बर्षिय छोरी र श्रीमतीलाई छाडेर फरार भएका श्रीमान खोज्न जाँदा पर्यो लफडा (भिडियो सहित)
शेरबहादुर देउवाले ज्योतिषलाई भने- ओहो ! अझै ४ महिना ! मैले के गर्ने त ?
फलफूल किन्न पसल पुग्दा बाँदर पसले बनेर फलफूल दिन थालेपछि…(भिडिओ सहित)
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (134619)